Aqalka Sare oo joojiyey wada shaqeyntii uu la lahaa Golaha Shacabka – Kalfadhi
Aqalka Sare oo joojiyey wada shaqeyntii uu la lahaa Golaha Shacabka
Golaha Aqalka Sare ayaa joojiyey wada shaqeyntii uu la lahaa Golaha Shacabka. Wuxuu ku eedeynayaa inuu marooqsaday awoodda Baarlamaanka Soomaaliya. Eedda Aqalka Sare waxaa ugu culus inuu Golaha Shacabku meel mariyey Misaaniyadda 2019, kadibna uu u geeyey Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isaguna uu saxiixay, iyadoon Aqalka Sare laga talagelin ansixinta Miisaaniyaddaas. Aqalka Sare wuxuu sheegayaa iney tahay waajib dastuuri ah inuu wax ka ansixiyo Miisaaniyadda Qaranka.
Waxaa kale oo uu ku eedeynayaa Golaha Shacabka inuu si qaldan u isticmaalay awoodda Baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu sheegay inuu Golaha Shacabka ku matalay Baarlamaanka Soomaaliya kulamo Baarlamaanno goboleedyo iyo kuwo caalami ah, iyada oo uusan Aqalka Sare wax war ah ka hayn. Golaha Aqalka Sare waxa uu, sidoo kale, ku dhaliilay Golaha Shacabka inuu ilaalin waayey guud ahaan sida ay shaqooyinka u kala leeyihiin ama ay u wada leeyihiin 2-da Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Hakintaas uu Aqalka Sare ku sameeyey wada shaqeyntii uu la lahaa Golaha Shacabka, waxa uu Aqalku sheegay inuu sii jiri doono illaa uu xalliyo Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Golaha Aqalka Sare ayaa, 31-kii bishii Diseembar ee sanadkii hadda dhamaaday, sugayey inuu Golaha Shacabku soo gaarsiiyo Hindisaha Miisaaniyadda 2919-ka, hase ahaatee waxay Xubnaha Goluhu ku kala tageen xaruntooda waqti dambe, markii ay hubiyeen inuusan Golaha Shacabku u soo wadin Miisaaniyadda, si ay uga doodaan, kadibna ay u ansixiyaan.
Guddiga Difaaca Golaha Shacabka oo ka doonaya Aqalka Sare inuusan wax ka beddelin Xeerka Ciidanka